ताल Tatarstan: नाम, विवरण। Tatarstan प्रकृति को विविधता। Tatarstan मा सबै भन्दा ठूलो ताल
Tatarstan प्रकृति आश्चर्यजनक विविध। र यो विविधता हाम्रो लेख समर्पित गरिनेछ छ। नदी र पानीका मुहानहरू, पोखरी र ponds, सुंदर ravines, पहाड र प्यास्टेल रंग Meadows - यो क्षेत्र वर्ष को कुनै पनि समय सुन्दर छ।
हाम्रो कथा को मुख्य विषय Tatarstan ताल हुनेछ। सूची र तपाईं यस लेखमा पाउनुहुनेछ क्षेत्र को प्रमुख reservoirs को विवरण।
द्रुत भूगोल Tatarstan
Tatarstan - रूसी संघ भित्र गणतन्त्र, आफ्नो क्षेत्रमा जनसंख्या र 44th मा आठौं। यसलाई जहाँ यसको पानी दुई ठूलो युरोपेली नदी सामेल ठाउँ मा, वोल्गा उत्तरी भाग मा स्थित छ - वोल्गा र Kama। Tatarstan Bashkortostan, Udmurtia, Chuvashia, Mari एल गणतन्त्र, सामारा, ओरेनबर्ग, Ulyanovsk र Kirov क्षेत्रहरु आसन्न छ। गणतन्त्र को मुख्य शहर - कजान (राजधानी), Naberezhnye Chelny, Nizhnekamsk, Zelenodolsk।
Tatarstan को चरम उत्तरी विन्दु को 56th समानान्तर मा छ, र चरम दक्षिण - यस 53 मा। लगभग 300 किलोमिटर - यी दुई अंक बीच दूरी। पश्चिम बाट पूर्व क्षेत्र 450 मी लागि फैलयो।
रूसी मंच - गणतन्त्र इलाकामा भएको वोल्गा-यूराल anticline बरु ठूलो tectonic संरचना भित्र स्थित छ। क्षेत्र ज्वलनशील र गैर-धातु खनिज (ग्याँस, तेल, कोइला, कोलतार, बालुवा, भवन पत्थर) को एक नम्बर झिकिएको छ।
सामान्य मा, Tatarstan - राम्रो विकास र एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक देश को विकसित उद्योग र कृषि संग क्षेत्र। यसको विकास एक अनुकूल आर्थिक र भौगोलिक स्थान (युरोप र एशिया को Crossroads मा) गर्न योगदान, साइबेरिया मा कच्चा माल र यूराल को शक्तिशाली औद्योगिक केन्द्र को स्रोतहरु निकटता।
Tatarstan प्रकृति को एक किसिम
क्षेत्र को समुद्र, समुद्रहरू र पहाड दायरा टाढा स्थित छ। तर, यसको प्रकृति यसको सौन्दर्य र ठूलो विविधता द्वारा प्रतिष्ठित छ।
क्षेत्र को जलवायु - समशीतोष्ण कन्टिनेन्टल। धेरै चिसो छैन - गर्मी मा यो हिउँदमा न्यानो छ। छोटो मा, जलवायु मानिसहरूको जीवन र कृषि विकास लागि आदर्श छ। एक उत्सुक वास्तवमा: यो जमिनको अवस्था थोरै क्षेत्र देश विभिन्न भागमा निकै फरक। त्यसैले, आफ्नो "सुन्दर" क्षेत्रहरु (Predkamja र पूर्वी Zakamja) यसको न्यानोपन र बारम्बार भोकमरी पश्चिम Zakamye लागि बाहिर खडा को पृष्ठभूमि विरुद्ध।
वन भएपछि Tatarstan को लगभग आधा ढाकिएको। तर यसको सक्रिय आर्थिक गतिविधिहरु को व्यक्ति निकै क्षेत्र को प्रकृति परिवर्तन भएको छ। प्राचीन steppes plowed थिए र वन - कट। आज, वन कवर गणतन्त्र को इलाका कुनै 20% भन्दा। तथापि, "हरियो गलैँचा" को क्षेत्र मा निरपेक्ष तथ्याङ्कले मामलामा Tatarstan बारेमा एक लाख हेक्टरमा छ। एक प्रभावशाली आंकडा, सबै वोल्गा को Tatarstan wooded क्षेत्र को शीर्षक कायम रहन्छ जो।
अर्को प्राकृतिक धन - Tatarstan ताल छ। तिनीहरूले व्यापक बस्तियों पानी आपूर्ति लागि प्रयोग गरिन्छ, साथै मनोरञ्जनको लागि। तिनीहरूलाई थुप्रै यस्ता पोखरी बिशप रूपमा माछा मार्ने, को लागि उपयुक्त हो। Tatarstan अक्सर वोल्गा, Kama, Vyatka र Belaya बताइरहेका, को "चार नदीहरूको भूमि" भनिएको छ। सबै क्षेत्र भित्र, त्यहाँ3हजार नदी र प्रवाहको छन्। तर केही ताल पनि अधिक छ भनेर थाहा!
एक सामान्य सिंहावलोकन र सूची को: गणतन्त्र को ताल
Tatarstan ताल - ती सबै को कति? Hydrologists कम्तिमा प्राकृतिक पानी शरीर को 8000 को लागि क्षेत्र भित्र गणना हुन्छन्। साथै, Tatarstan मा बीसौँ शताब्दीको दोस्रो आधा मा चार ठूलो reservoirs र 550 ponds सिर्जना गरिएको थियो।
floodplain र Karst सम्बन्धित प्रकार को उत्पत्ति मा ताल को यो भूमि को सबै भन्दा। अड्डा, ब्रीम, Catfish, आक्षेप, पाइक र अरूलाई: Tatarstan मा त्यहाँ bony माछा को 40 भन्दा बढी प्रजाति छन् reservoirs। Tatarstan मा सबै भन्दा ठूलो ताल - देश मात्र 30 औसत जंगली बँदेल मा ताल को ठूलो क्षेत्र। यसको पानी सतह को क्षेत्र - 112 हेक्टरमा।
Tatarstan advantageously खोक्रो पोखरी। तिनीहरूलाई को भन्दा एक गहिराई तीन मीटर अधिक छैन। Tatarstan को गहिरो reservoirs - Tarlashinskoe ताल Aktash विफलता छ।
निस्सन्देह, एक लेखमा गणतन्त्र सबै reservoirs वर्णन र सूची असम्भव छ। तल Tatarstan को सबै भन्दा ठूलो ताल हो (सूची दस प्रमुख reservoirs समावेश छ। तालिका हेर्नुहोस्)।
Tatarstan सबैभन्दा रोचक र चिरपरिचित पोखरी बारेमा, हामी जारी छौँ।
Tatarstan - एक वन, नदी, र पाठ्यक्रम, पोखरी जिल्ला। यसबाहेक, गणतन्त्र को प्राकृतिक reservoirs थुप्रै स्थानीय बासिन्दा लागि बाँकी र मनोरञ्जनको लोकप्रिय ठाउँ हुन्। एक हडताली उदाहरण - निलो पोखरी, कजान को सरहद मा स्थित।
बहने, महान् र आफूलाई सानो सम्झने निलो पोखरी - 0.3 हेक्टरमा को कुल क्षेत्र संग तीन सानो पोखरी यस hydrological प्रणाली। ती सबै दुई सय वर्ष पहिले गठन अचानक sinkhole द्वारा जटिल थिए Kazanka नदी oxbows छन्।
नीलो लेक गर्व Tatarstan प्राकृतिक आश्चर्य कल। तिनीहरूलाई मा पानी Azure गर्न कालो यसका रंग परिवर्तन वर्ष को समय मा निर्भर। यस पोखरी तल देखि एक अद्वितीय नुन माटोको, जो संग धेरै छाला रोग उपचार mined छ। यी reservoirs पनि परंपरागत यहाँ नयाँ वर्षको गोता प्रदर्शन जो Divers र "walruses", को धेरै रुचाउनु छन्।
को प्रकृति पोखरी अध्ययन 1829 ethnographer कार्ल Fuchs फिर्ता लगे। 1994 मा, eponymous प्रकृति आरक्षित यहाँ स्थापित भएको थियो - यो "नीला लेक"।
Tatarstan आफ्नो reservoirs बारेमा रोचक कथाहरू धेरै बताउन सक्छ। गरेको यो सुन्दर क्षेत्र को ताल मार्फत हाम्रो भर्चुअल यात्रा जारी गरौं!
बिशप (वा Tarlashinskoe) ताल - Tarlashi Laishevo क्षेत्रको गाउँमा नजिकै Karst तालाब undrained। यो 500 मिटर अधिकतम चौडाई मा दुई भन्दा बढी किलोमिटर द्वारा लम्बाइमा विस्तार गरिएको छ। ताल सबैभन्दा ठूलो गहिराई - 18 मीटर।
यसलाई आफ्नो मूल अनुपम छ किनभने बिशप लेक, प्रकृति को एक स्मारक घोषणा गरे। साथै, predominantly भूमिगत जलाशय खुवाउनुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, ताल किनारा अब सक्रिय प्राकृतिक र अनधिकृत तटों प्राप्त छन्।
ताल को चिल्लो सतह गर्न अर्को XIX सताब्दी इतिहासकारहरूले देखि डेटिङ, बिशप रहेका सुन्दर पत्थर चर्च। को तालाब को विपरीत किनारमा देखि पुरानो चर्च को शानदार दृश्यहरु भेटी।
कजान को पश्चिम गर्न 20 किलोमिटर मा Raifa ताल छ। को XVII सताब्दी को वास्तुकला को एक मूल्यवान स्मारक - यसको किनारा परमेश्वरको विहारको आमा को एक जटिल छ। ताल Raif, को चिल्लो सतह Tatarstan को सबै भन्दा शानदार दृश्यहरु को पक्कै एक संग संयोजन मा उच्च सफेद belfry।
मिति, ताल क्षेत्र बारे 32 हेक्टरमा छ। 1.3 मी - को तालाब एक गोलो आकार, आफ्नो कुल लम्बाइ छ। ताल Raif अधिकतम गहिराई - 19 मीटर। हालैका दशकहरूमा यो कारण सक्रिय प्रक्रिया को जलाशय को siltation कम छ।
Karst पातालमा गणतन्त्र
ताल Aktash Tatarstan मा Almetyevsk जिल्ला गहिरो मा विफलता। यसको गहिराई 28 मिटर पुग्छ! कि अन्य, जस्तै - पानी को यो शरीर Karst पतन, पानी भरिएको। यो अपेक्षाकृत हालै गठन भएको थियो - 1930 मा। एक संस्करण अनुसार, यस क्षेत्रमा देशमा कारण बारी मा, पुरानो तेल वेल्स उब्रिएको जो, voids, गर्न असफल भएको छ।
बस23 मीटर: सुरुमा, विफलता धेरै सानो थियो। तर समय, यो आकार बढेको छ। को sinkhole को तल ताल प्रारम्भिक 50s मा गठन भएको थियो।
स्थानीय Aktashskoe विफलता सन्दर्भमा लिजेन्ड हसाउने लोकप्रिय। ताल मा सोभियत समयमा जो कैस्पियन सागर मा एक निश्चित समय पछि बाहिर आए बैरल, ड्रप कि अफवाह।
लेक काडा-KUL को राक्षस
यो Tatarstan यसको आफ्नै छ बाहिर जान्छ लच नेस राक्षस! यो एउटा सानो ताल काडा-KUL मा, क्षेत्र Vysokogorskom गणतन्त्र बसोबास। कम से कम, त्यसैले एकदम स्थानीय जनसंख्या लिजेन्ड लोकप्रिय भन्छन्।
पानी को नाम "कालो ताल" रूपमा तातार भाषा बाट हस्तान्तरण गरिएको छ। पानी साँच्चै कारण सक्रिय Karst को dissolution धेरै गाढा छ। धेरै साक्षी तिनीहरूले रहस्यमय ताल राक्षस हेर्न वा आफ्नो जंगली गर्जन सुन्न सक्षम थिए भन्छन्। तर, यो सबै फरक वर्णन।
त्यहाँ काडा-KUL वास्तवमा अज्ञात छ ताल कुनै पनि mythical प्राणी जीवित। तर यहाँ अड्डा, आक्षेप र आक्षेप राम्रो यसको पानी मा लाग्छ।
प्रकृति Tatarstan को विविधता छक्कै पर्छन् र स्थानीय खुला रिक्त मार्फत यात्रा गर्ने सबैलाई amazes। यसको सौन्दर्य प्रेम पर्नु छैन बस असम्भव छ! Tatarstan ताल - ठूलो मनोरंजन र पर्यटक क्षमता छ र महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक मूल्य छ जो यस क्षेत्र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्तिहरू को एक।
जहाँ टाइगर्स हो, धेरै मान्छे अझै पनि थाहा छैन
माछा को उमेर कसरी निर्धारण गर्ने?
प्रकृति र मानव जीवन, यसको आर्थिक प्रयोगमा वनको भूमिका
कसरी चरा grechishka गर्छ? वर्णन, संरचना, बिरुवाहरु को उपयोगी गुणहरू
Arctium tomentosum: विवरण, फोटो
बैजनी cortinarius - विदेशी रंग संग च्याउ
हतार मा नुस्खा: स्याउ संग आवारागर्दी ~ देखि चार्लोट
सबै उमेरका बच्चाहरुका लागि ब्वाँसा बारेमा पहेलियों
को sphinxes लागि सुरुचिपूर्ण र सहज वस्त्र
Shamballa कंगन। बुनाई र क्लासिक डबल कंगन
"Dormikind": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Dormikinde" को समीक्षा
"गियोटो", मस्कोमा रेस्टुरेन्ट: मेनु, समीक्षाहरू
क्वार्ट्ज वा यांत्रिक - हेरेको के राम्रो? उपकरण को तुलनात्मक विशेषताहरु र छनौट सुझावहरूको